Posted: Guraandhala/February 6, 2013 · Finfinne Tribune | Gadaa.com | Comments (7)
* Ibsaa Guutama miseensa dhaloota saganta ABO isa jalqabaa baasan kees.
Feb 6, 13 at 1:40 pm
Obbo Ibsaa Guutamaa, hayyuu kabajamaa Oromoo, ulfaadhaa. Qabsoo bilisummaa utuu walirra hinkutiin gaggeessaa waan jirtaniif isin namoota akka modeelaatti ilaalamuu qaban keessaa tokko. Akkuma barreeffama keessan armaan olii keessatti tuqtan birmadummaa fi walabummaan mirga uumamaa ilmoo namaa ti. Ummanni tokko mirga kana eegsifachuuf qabsaa’uu qaba malee hayyama eenyuu iyyuu gaafachuu hinqabu. Kallattiin qabsoo Oromoo mirga kana mirkaneeffachuu dha. Gaaffiin oromoo gaaffii tayitaa utuu hintaane gaaffii abbaa biyyummaati. Gaaffiin Amaaraa immoo gaaffii taayitaa ti. Kanaaf kaayyoon qabsoo keenyaa walhinfakkaatu. Oromoonni akkuma dur habashoota wajjin hiriiruu fi isaan jala kaachuu barbaadan dogoggora keessa utuu hinlixiiin dura garaagarummaa qabsoo Oromoo fi qabsoo jaraa adda baafachuu qabu.
Feb 7, 13 at 12:49 pm
J/Ibsaa guutamaa .
Galatoomi galanni kee bilisummaa oromiyaa siif haata’u jechaa gara fuulduraattis jabaadhu nujajjabessi barruu kekana irraa waan hedduu barnoota heddun argadhe akka kootti lammi oromoo hundi barnoota guddaa irraa argatu jedhen yaadaa
Feb 7, 13 at 1:29 pm
Galataa guda qabdu Obbo Ibsa. Yeroo tokko tokkoo baarruu keessan nan laala. Wa’ee barra Xaliyyaan na yaadachisuu keessanf galatooma je’a. Garu Fitwaraar Karkarssaa Guteef Dajazamachii Odda Jotee Geerra irrati Ras Imiru Haile Silasie yaa guu Boji’an biyyaa issan irratti dhabatan loolan injiffannoo mirkaneesan male computarra jalla ta’an mitti Gutamma Birbir akkasumma. Ammoo kan issin gafachuu barbadee kara tokkoo qoofa bilisummaa ummata tokko dhufa? Nammoota biyyaa Oromiyyaa keessaa jiraatanif olashee kan jiran immamataa akkam qabdu?
Feb 8, 13 at 5:36 pm
Jaarsi Akkas kunoo.Galatooma Obbo Ibsaa.Ulfaadhaa raagaa bulaa!
Feb 10, 13 at 10:02 am
Hayyuun Oromoo yeroosaatti kunoo akkas Seenaa barsiisa Magguddummaan Lubbuu dheerina eebba Waaqaati obbo Ibsaa Guutamaa akkuma kaleessaa Oromoo qaraa jiru ulfinaaf jaalala guddaa isinii qaba ummanni Oromoo !!jabaadha.
Feb 10, 13 at 3:59 pm
Haayyuuni oromoo akka obbo ibsaa jirtani umriini keessani yaadheeratu.yeero eggatanii afaani nufaajjeessufi namootini oromoo irratti ka’aani heeddudhaa yaat’uu malee obbo ibsaani deebii ga’aa ta’ee nuffi laattanii jirtuu.namootini oromoo burjaajeessu fii waliini dhahuu barbaaddani heeddutu jiraa kanaafi waahunda hubatanii laalunigaarii dha. Obbo ibsaa nuffi jiraadhu.
Feb 10, 13 at 4:17 pm
Obbo ibsaa galata guddaa qabduu.namootini oromoo irratti ka’aani bifa adda aaddaatini nutti dhufani yaata’uu malee haayyuuni oromooni qabduu keessaa isiniini tokko gatii taatanii deebii gaarii nuffi deebisaajirtu.kanaafi diina oromoo kani keessaafi kani alaa yeero ittieggannudha.obbo ibsaa siwajjini jirraa nuujabaadhu umrii rabbi siifi yaalaatu.